यस्तो छ एसपी चन्दको नियत !
५९४९ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७४ आषाढ ०४ , ०३:१३ बजे
महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख (एसपी) प्रकाश बहादुर चन्दको निर्देशनमा पत्रकार खेम भण्डारीलाई शनिबार प्रहरीले
हिरासतमा राखेको छ । भण्डारीलाई पक्राउ गरेको केहीबेरमै पत्रकार गणेश भट्टलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । घटना निकै नाटकीय र योजनाबद्ध देखिएको छ ।
पक्राउको कारण युवती लफडा पत्रकार भण्डारी र भट्ट पक्राउको मुख्य कारण शनिबार प्रहरीले हिरासतमा लिएका २ युवतीको पक्राउ प्रकरणसँग जोडिएको छ । कञ्चनपुर प्रहरीले गत शनिबार साँझ ८ बजेतिर महेन्द्रनगरस्थित बसपार्कमा होटल सञ्चालन गरिरहेका दुई युवतीलाई फिल्मी शैलीमा पक्राउ गरेको थियो । बसपार्कमा ‘स्टाफ होटल’ नामले व्यवसाय गरिरहेका पूजा नाथ र कञ्चन नाथलाई प्रहरीले अपहरण शैलीमा गिरफ्तार गरेको थियो ।
कञ्चन विद्या मन्दिर नजिक डेरा गरी बस्ने ती दुई युवतीलाई होटल बन्द गरेर डेरातर्फ जाँदै गर्दा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । तर, उनीहरुलाई पक्राउ गरेको विषयमा प्रहरीले आफूलाई थाहा नभएको बताउँदै आएको थियो । वडा प्रहरी कार्यालयले जिल्लालाई देखाउँदै आएको थियो भने जिल्ला प्रहरीले वडा प्रहरीतिर पन्छाउँदै आएको थियो । युवतीहरु गिरफ्तार भएलगत्तै सोधपुछ तथा खोजतलास गरेका एक कानुन ब्यवसायीले जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रकाश बहादुर चन्दलाई फोन गर्दा उनले आफूलाई जानकारी नभएको र बुझेर तत्काल फोन गर्ने बताएका थिए । तर, त्यसलगतै एसपीले मोबाइल स्वीच अफ गरेका थिए ।
वडा प्रहरी कार्यालयका सई बीरबहादुर ऐरले सशस्त्र प्रहरी गुल्मले ती युवती र युवकलाई पक्राउ गरेको जबाफ दिएका थिए । तर, युवतीहरुलाई नाटकीय रुपमा प्रहरीले नै पक्राउ गरेको खुलासा दैनिक मानसखण्डमा गरेका थिए । त्यसपछि मात्र प्रहरीले युवतीहरु आफ्नै हिरासतमा रहेको स्वीकारेको थियो । पूजा तथा कञ्चनका निकट व्यक्तिहरुलाई उल्लेख गर्दै मानसखण्डले लेखेको थियो ‘एसपी चन्दले शनिबार दिउँसो दुबै युवतीलाई खाजा खान बोलाएका थिए तर ती दुबै गएका थिएनन् ।
यसअघि लगातार तीन दिन दुबै युवतीलाई केही घण्टा हिरासतमा राखेर छोडिएको समेत पूजा र कञ्चनका निकटम् व्यक्तिले दावी गरेका छन् । पूजा र कञ्चन निकट ती व्यक्तिका अनुसार एसपी चन्दले बाराम्बार फोन गरेर उनीहरुलाई कहिल्यै खाजा त कहिल्यै खानाका लागि निम्त्याउने गर्थे ।
पूजा र कञ्चनले एसपी चन्दको ‘आग्रह’ अस्वीकार गरिरहेपछि उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय झिकाएर छोड्ने गरिएको ती व्यक्तिको भनाई छ ।’ आफ्ना कर्तुतका बारेमा समाचार प्रकाशित गरेपछि एसपी चन्दले मानसखण्ड दैनिकका पत्रकारद्धय भण्डारी र भट्टलाई निशाना बनाएका हुन् ।
एसपीको गिद्दे नजर
पत्रकार भण्डारी र भट्टलाई युवतीहरुको चरित्रहत्या गरेको उजुरीका आधारमा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । युवतीहरुका बाबु खेमराज नाथको उजुरीका आधारमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीको दाबी छ ।
युवतीहरुको नाटकीय रुपमा गरिएको गिरफ्तारी र एसपीको नियतका विषयमा पत्रकार भण्डारीले लगातार समाचार लेखेकै कारण तारो बनाइएको देखिन्छ । घटनामा युवतीका बाबु खेमराज नाथलाई समेत एसपी चन्दले जबर्जस्ती पत्रकारविरुद्ध उजुरी दिन लगाएको देखिएको छ । मानसखण्डले पीडितहरु युवतिहरुकोे पक्षमा वकालत गर्दै आएका थिए । जबकी उनीहरुलाई युवतीकै बाबुको उजुरीको हबला दिँदै पक्राउ गरियो । यो सरसर्ती षडयन्त्र र योजनाबद्ध देखिन्छ ।
प्रहरीले नै बाबुलाई उजुरी दिन बाध्य बनाइएको देखिन्छ । बिभिन्न लफडामा फस्दै आएका एसपी चन्द करिब ४ महिना अघिमात्रै कञ्चनपुरको एसपी बनेर आएका थिए । असार १ गते उजुरी परेको भनिए पनि उनीहरुलाई शनिबार पारेर पक्राउ गर्नुले एसपी चन्दको नियतमा शंका गर्ने ठाउँ देखिएको छ ।
कार्यालय खुल्ने दिन पक्राउ गर्दा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेर रिहा हुनसक्ने भएकाले दुःख दिने नियतले पत्रकार
भण्डारी र भट्टलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पत्रकार भण्डारीलाई दिउँसो सवा १२ बजे मानसखण्डको कार्यालयबाटै पक्राउ गरिएको थियो भने कार्यकारी सम्पादक भट्टलाई महेन्द्रनगरको ओपेरा होटल नजिकबाट पक्राउ गरिएको थियो । कञ्चनपुरका पत्रकारहरुले भण्डारी र भट्टलाई तत्काल रिहा नगरे जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न तयार रहेको चेतावनी दिएका छन् ।
के भन्छन कानुन ब्यवसायी
कानुन ब्यवसायीका अनुसार एसपी प्रकाश बहादुर चन्दले आफ्नो क्षेत्राधिकारको उलंघन गरेका छन् । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन अनुसूची–१ भित्र यो मुद्दा हेर्ने अधिकार सोझै अदालतलाई छ । ‘सोझै अदालतमा मात्रै मुद्दा चलाउन सकिने बिषयलाई प्रहरीले कसरी सार्वजनिक अपराधको दायरा ल्यायो ?’ एक कानुन ब्यवसायीले भने ।
उजुरीमा मानसखण्डले पत्रिकाले समाचार लेखेर चरित्र हत्या गर्‍यो भन्ने उल्लेख छ । समाचार लेखेर चरित्र हत्या वा मानहानीको दावी अदालतले हेर्ने प्रावधान छ । ‘लिखित बेइज्ततीको कुरो उजुरीमा छ, सार्वजनिक अपराध कसरी हुन्छ ?’ ती कानुन ब्यवसायीले भने ‘समाचारको बिषयलाई लिएर प्रतिशोध लिने काम भएको देखिन्छ ।’
शनिवार नै किन पक्राउ
मानसखण्डका सम्पादक खेम भण्डारी र कार्यकारी सम्पादक गणेश भट्टलाई शनिवार दिन पारेर पक्राउ गर्नुको रहस्य के छ ? असार १ गते विहीवार युवतिका वुवाले दिएको उजुरीलाई तत्कालै दर्ता गएिको मुद्दामा प्रहरीले तत्कालै किन उनिहरुलाई हिरासतमा लिएन ।
शुक्रवार कुरेर शनिवार अड्डा अदालत बन्द हुने दिन मौका छोपी उनिहरुलाई हिरासतमा लिनुको अर्थ के छ ?
दिनभर एसपी सम्पर्क बाहिर उनिहरुलाई पक्राउ आदेश दिएपछि सनिवार दिनभर एसपि कार्यालय बाहिर बसे । पत्रकार महासंघलगायतका पदाधिकारीले लगायत सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरुले सम्र्पक गर्न खोज्दा दिनभर उनको फोन सम्पर्क हुन सकेन । डिएसपि भीमदहालले आफ्नो हातमा केही नरहेको र एसपी साप नआउदा सम्म कुनै आफुले केही निर्णय गर्न नसक्ने जवाफ दिए । उनले कानुन सम्मत उनिहरुलाई हिरासतमा लिइएको तर्क ब्यक्त गरे ।
कहाँ छन् उजुरीकर्ता युवतिका वुवा
आफ्ना दुई छोरीलाई प्रहरीले सार्वजनिक मुद्दा चलाएको अवस्थामा बैतडी घर भएका खेमराज अहिले उजुरी दिए लगत्तै पुनः बैतडी फकिएका छन् ।
दुई छोरी हिरासतमा रहेको बेला उनले अड्डा अदालत धाउनुको सट्टा उनकै छोरीकै पक्षमा वकालत गर्ने पत्रकार बिरुद्ध नै उजुरी दर्ता गरेर किन बैतडी फर्किए । उनका दुई छोरी अझै पनि प्रहरी हिरासतमा छन् । उनिहरुलाई छुटाउन वा मुद्दा मामिलाका बिषयमा वकिलसंग किन सम्र्पक नगरी बिशुद्ध पत्रकार बिरुद्ध उजुरी लेखेर फर्किए ।
प्रहरीले पूजा र कञ्चन बिरुद्धपनि केही सार्वजनिक अपराध अन्र्तगत मुद्दा अघि बढाएको छ । यसले पनि पत्रकार हिरासतमा लिनुको अर्थ बुझ्न सकिन्छ ।
एसपीको पत्रकार सम्मेलन
मानसखण्डले पूजा र कञ्चनलाई अपहरण शैलीमा पक्राउ गरेको समाचार लेखेपछि एसपी प्रकाश चन्दले पत्रकार सम्मेलन गरे । समाचार पछि सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा चलाइसकेका युवतिले सम्मेलनमा पत्रकारहरुमाझ प्रहरीको उपस्थिीतीमा दिएको बयान कत्तिको साँचो होला त्यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । उनिहरुलाई स्वतन्त्र रुपले नत कुनै पत्रकारले भेट गर्न पाएको छ न अधिकारकर्मीले नै । तर उनिहरुको दवाइएको आवाज मानसखण्डले बाहिर ल्याउदा एसपि चन्द प्रतिशोधमा उत्रिएको प्रष्ट भएको छ ।
सम्पादक भण्डारीको प्रतिक्रिया
प्रहरीले पक्राउ गरेपछि पत्रकार खेम भण्डारीले सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिदै दैनिक मानसखण्डका सम्पादक खेम भण्डारीले समाचार लेखेकै भरमा पक्राउ गरिनु प्रेस स्वतन्त्रता माथीको ठाडो हस्तक्षेप भएको बताएका छन् । प्रहरी ज्यादती विरुद्ध छापिएको समाचारकै भरमा रिस साध्न आफ्नो संचारगृह बन्द हुने गरि आफु र कार्यकारी सम्पादकलाई पक्राउ गरेको बताए ।
‘यो प्रेस स्वतन्त्रता माथीको ठुलो प्रहार हो, ‘उनले भने, ‘समाचार लेखेकै भरमा अपहरण शैलीमा प्रहरीले हामीलाई पक्राउ गर्‍यो .’ प्रहरीमा दर्ता नहुने मुद्दा प्रहरीले पीडितलाई उस्काएर आफुहरु बिरुद्ध जबरजस्ती मुद्दा दर्ता गराएर लफडा मच्चाएको मानसखण्डका सम्पादक भण्डारीको बताए । ‘यो प्रेस स्वतन्त्रता बिरुद्धको सरा सर कदम हो, ‘उनले भने, ‘म र मेरो सस्था यो मुद्दाको सामना गर्न तयार छ ।’
पत्रकार महासंघ केन्द्रको आपत्ति
प्रहरीले दैनिक मानसखण्डका सम्पादक खेम भण्डारी र कार्यकारी सम्पादक गणेश (जी) भट्टलाई पक्राउ गरेको घटनालाई नेपाल पत्रका महासंघले पत्रकार विरूद्धको ज्यादती, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बिपरित कार्य भनेको छ।
महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा सुदूरपश्चि संयोजक प्रकाशविक्रम शाहले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक अपराध गरेकाले अनुसन्धानको शिलशिला भन्दै प्रहरीले पत्रिकाको कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिनु पत्रकार विरूद्धको ज्यादती, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बिपरित कार्य बताएका छन्।
साथै, महासंघले पत्रकारद्वय भण्डारी र भट्टलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ। ‘पत्रिका नै बन्द गर्ने गरी सम्पादक र कार्यकारी सम्पादकलाई गिरफ्तार गरेर सरकार पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र प्रेस नियन्त्रण गरी निरंकुशतातिर उन्मुख भएको छ। सरकारको यो रवैयाप्रति पत्रकार महासंघ सुदूपश्चिम घोर निन्दा गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
पत्रकार गिरफ्तारी प्रकरणमा नयाँ तथ्य खुल्दै
धौलाकोटमा प्रहरीलाई जग्गादान
कञ्चनपुरमा पत्रकार पक्राउ प्रकरण : प्रहरीलाई विवेकसम्मत तरिकाले काम गर्न उच्च अदालतको आदेश
२८ घण्टे हिरासतपछि पत्रकार भण्डारी र भट्ट रिहा
कञ्चनपुरका पत्रकार मनोनयन दर्ताको रिपोर्टिङ छाडेर धर्नामा
एसपी चन्दको खास हैसियत !